Gammoojjii fii baadiyyaa qofa osoo hin taane magaalota keessa galaa jirra | Oromia Shall be Free
bilisummaa 1 week ago	Comments Off on Gammoojjii fii baadiyyaa qofa osoo hin taane magaalota keessa galaa jirra
Waraanni bilisummaa Oromoo (WBO) kan mootummaan ‘ABO-Shanee’ jechuun paarlaamaan shororkeessummaan faraje, erga bulchiinsa Abiy Ahimad waliin wal waraanuu eegalee amma waggoonni sadii ol lakkaa’amaniiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaafi Federaalaa humnoota kanneen balleessuuf yeroo adda addaatti oppereeshinii gaggeessaas ammallee waraanni itti fufeera.
Duula waraanaa mootummaan gaggeessaa jiruun hidhattootni kunniin sadarkaa ”yaaddoo biyyaa hin taanerra gahaniiru” jedhamus haleellaawwan tibba kanaa magaalota Gaambellaa, Dambidoolloofi Gimbii milkaahina duulota mootummaa gaaffii keessa galcheera.
Torban darbe keessa Adda Bilisummaa Uummata Gambeellaa waliin ta’uun magaalaa Gambeellaatti haleellaa raawwatee baheen namootni 40 ta’an ajjeefamuun gabaasameera.
Mootummaan naannichaa hidhattoota magaalaa Gambeellaatti haleellaa gaggeessan kunneen keessaa kan 40 ta’an ajjeesuu himullee, gareen hidhattootaa kana haaluun kaayyoo opereeshinicha gaggeessaniif milkeessanii bahuu himatan.
Akkasumas, haleellaa Waxabajjii 18, 2022tti Wallagga Lixaa aanaa Gimbii, ganda Toleetti gaggeeffameen namoonni nagaa lakkoofsi isaanii mootummaan ta’e qaama walabaatiin hin ibsamne hedduu ajjeefamuun gabaafamee.
Deetaan Ministeera Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa obbo Kabbadaa Deessisaa magaalota sadeen keessatti hidhattootni haleellaa raawwachuu mirkaneessanii mootummaan tarkaanfii fudhachuu itti fufeera jechuun BBC’tti himan.
Hoogganaa WBO kan ta’e Kumsaa Dirrabaa (Jaal Marroon) yaada BBC’f kenneen ammoo kaayyoon haleellaawwan kana humni isaanii magaalota eegumsa qabanis to’achuuf gahumsa qabaachuu agarsiisuuf ta’uu dubbatan.
Dimma yeroorratti gaafiif deebisa BBC Hogganaa WBO Jaal Marroo dirribsaa waliin taasise
Guutuu gaafiif deebisaa kanaa as tuqaa
Tags Abo bbc gabmbeellaa hogganaa Marroo driirbsaa ola shanee WBO
Previous Majlisnni Oromiyaas akkuma ka duraa Zulmii nurratti dalagaa jira
Next Sa’aa 24 keeysatti waajjirri nuuf haa gad dhiifamu!